ဆွာရက် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ပျက်ပြီလား? ဈေးကွက် အတွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေကို ချပြသွားတဲ့ ဘာကာ အားကစား ဒါရိုတ်တာသစ် ပလာနက် - SPORTS MYANMAR
ဆွာရက် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ပျက်ပြီလား? ဈေးကွက် အတွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေကို ချပြသွားတဲ့ ဘာကာ အားကစား ဒါရိုတ်တာသစ် ပလာနက်
ကတ်တလန် အခြေစိုက် ရေဒီယို ဖြစ်တဲ့ RAC1 ကတော့ လူးဝစ်ဆွာရက် ရဲ့ အီတလီ ပတ်စ်ပို့ ရရှိဖို့ ဘာသာစကား အရည်ချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခဲ့တာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှုးဟာ အချိန်မီ ပတ်စ်ပို့ ရယူနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရလာဒ် အနေနဲ့တော့ ဂျူဗီ က သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရယူထားတဲ့ စာချုပ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ဖျက်သိမ်းကာ ၊ ဇက်ကို ဘက်ကို မြှားဦး လှည့်သွားဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဂျူဗီ ဟာ ဆွာရက်ကို လက်ရှိ အနေအထားအတိုင်းလဲ ပြသနာ မရှိပဲ ခေါ်ယူခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ်တွေ ပါဝင် ကစားဖို့ စာရင်းသွင်းခွင့် ရှိမှာ မဟုတ်ပဲ ၊ ရှုံးထွက် အဆင့်မှသာ စတင်ပါဝင်ခွင့် ရဖို့တော့ လမ်းကြောင်း တစ်ခုရှိနေပါတယ်။
သို့သော် ကစားသမား နဲ့ ကလပ် အသင်းအကြားက စာချုပ် ဖျက်သိမ်းမှု ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားနေမှုကလဲ အဖြေ ရှာနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် ၊ သူဟာ နူးကမ့်မှာပဲ ဆက်ရှိ သွားမယ့်ဘက်က ပိုပြီး အရေးသာနေပါပြီ။
ဒီအကြောင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အားကစား ဒါရိုတ်တာ ပလာနက် က “ ဆွာရက် ဟာ အသင်းကို စတင် ရောက်ရှိလာတဲ့ အချိန်ကစလို့ အရေးပါတဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက် အဖြစ် ပေးဆပ် ကစားခဲ့တဲ့သူပါ။
လက်ရှိ သူ့ရဲ့ အနေအထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် အရင် ကတည်းက ပြောထားခဲ့သလိုပါပဲ ၊ ဘာစီလိုနာ အတွက် အများကြီး ပေးဆပ် ကစားထားတဲ့ ဘောလုံးသမား တစ်ယောက်အပေါ်ကို ကျနော်တို့က လေးစားမှု အပြည့် ထားပြီးသားပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ အတွင်း ကျရှုံးခဲ့တဲ့ ရလာဒ်တွေကြောင့် အသင်းဟာ နည်းပြသစ် နဲ့ အတူ အပြောင်းလဲတွေ လုပ်ဆောင်နေတာလေ။ ကျနော်တို့က ကစားသမားကိုရော ၊ စာချုပ် အနေအထား ကိုပါ လေးစားမှု ရှိပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်က အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့ အထိ ဖွင့်လှစ် သွားမှာ ဖြစ်လို့ ဒီကြားထဲမှာ ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်” လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ပါတယ်
ဘာစီလိုနာ ဟာ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဗီဒယ် ကိုတော့ အင်တာမီလန် အသင်းဆီ ရောင်းချနိုင်တော့မှာပါ။ ကနဦး ပြောင်းရွှေ့ကြေး က ယူရို5သိန်း ဖြစ်ပြီး ၊ နောက်ထပ် စွမ်းဆောင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ နဲ့ သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပလာနက် က အခုလို အတည်ပြု သွားခဲ့ပါတယ်။
“ ဗီဒယ် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စ ဆွေးနွေးမှုတွေ ကတော့ နောက်ဆုံး အဆင့်ကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ။
ဒီအခြေအနေမှာ အသင်းအတွက် အများကြီး ပေးဆပ်ကစားခဲ့တဲ့ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စက အပြီးသတ်ဖို့ နည်းနည်းလေး ကျန်နေသေးလို့ ၊ လောလောဆယ်တော့ အတည်ပြု မပေးပါရစေနဲ့” လို့ မနေ့က သတင်းထောက်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြန်လည် ဖြေကြားသွားခဲ့ ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ရှာပုံတော်ဟာ ဆွာရက် အသင်းကနေ ထွက်သွားတာ/ မသွားတာ နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦးနဲ့ မန်စီးတီး က ခံစစ်မှုး အဲရစ် ဂါစီယာ ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အကြောင်းလဲ ပရိသတ်တွေ ကို အသိပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ ဌာန က အသင်းရဲ့ ကစားသမား အင်အားကို တောင့်တင်းအောင် ကြိုးစားနေတာပါ။ ဒီနေရာမှာ အတွေ့အကြုံ နဲ့ အရည်အသွေးကို ဦးစားပေးထားပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်က အသင်းမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမားတွေက ကစားပေးနိုင်ခြင်း မရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဘာစီလိုနာ ဟာ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားတွေချည်းပဲ စုဝေးနေတဲ့ နေရာတစ်ခု ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်ပြီး ထိန်းထားနိုင်အောင်လို့ပါ။
ခံစစ်အတွက် အားဖြည့်ဖို့ အတွက် ကစားသမားသစ် ရှာဖွေနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ က အမှန်ပါပဲ။ အဲရစ် ဂါစီယာ ကတော့ ကစားသမားကောင်းလဲ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အကယ်ဒမီက မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူလေ” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။